ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီတွင်းရှိ BIA. BDA. PBF တပ်မတော်သားဟောင်းများ၏ `တပ်မတော်’ သို့ ပန်ကြားချက် (၅ – ၆ – ၂၀၀၃) | Communist Party of Burma
By admin | June 5, 2003
← နအဖ အကြံပေးအဖွဲ့ သို့ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မတီမှ တိုက်ရိုက်ပေးစာ (၂ – ၆ -၂၀၀၃) ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီတွင်းရှိ BIA. BDA. PBF တပ်မတော်သားဟောင်းများ၏ ဒုတိယအကြိမ် ‘ တပ်မတော် ‘ သို့ ပန်ကြားချက် (၂၆ – ၆ – ၂၀၀၃) →